संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब र सुविधा ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
संसारकै शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपतिको कति हुन्छ तलब र सुविधा ?
अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पद विश्वकै सर्वोच्च पद मानिन्छ । यो पद हासिल गर्ने व्यक्तिले अमेरिकाको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्छन् ।
अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनु प्रतिष्ठाको विषय मात्रै नभई अन्य विभिन्न सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ । धनी मुलुक भएका कारण त्यहाँका राष्ट्रपतिले कति तलब र अन्य सुविधा पाउछन् भन्ने हाम्रो जिज्ञासाको विषय हुन सक्छ । आज हामी तपाईलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले पाउने तबल र सुविधाको बारेमा बताउन गइरहेका छौ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष ४ लाख डलरको तलब बुझ्ने गर्छन् । यती मात्र होइन उनलाई एक घर, व्यक्तिगत विमान र हेलिकप्टरको सुविधा पनि दिइन्छ । राष्ट्रपतिले पाउने तलब बाहेकका सुविधा निम्न बमोजिम छन्–
सन् १८०० देखि अमेरिकी राष्ट्रपतिको आधिकारिका निवासमा कयौ परिवर्तन आइसकेका छन् । ६ तले घर, ५५ हजार वर्ग फीटको भवनमा १३२ कोठा, ३५ बाथरुम र २८ फायरप्लेस समावेश छन् । यसमा एक टेनिस कोर्ट, एक बलिङ एली, एक सिनेमा थियटर, एक जगिङ ट्रयाक र एक स्वीमिङ पुल पनि समावेश छन् । ह्वाइट हाउसमा पाँच भान्से, सोशल सचिव, फूलवाला लगायतका अन्य कर्मचारीहरु पनि हुने गर्छन् ।
अमेरिकाका राष्ट्रपतिका लागि व्यवस्था गरिएको आधिकारिक राज्य अतिथि गृह ७० हजार वर्ग फीटको छ । यसमा ११९ कोठा छन् । जसमा पाहुना र कर्मचारीका लागि २० भन्दा बढी बेडरुम समावेश छन् । यसमा ३५ बाथरुम, ४ डाइनिङ रुम, एक जिम, १ फूलको पसल र एक शैलुन छ ।
यसबाहेक, राष्ट्रपतिलाई विभिन्न १७ वटा शीर्षकमा भत्ता प्राप्त हुन्छ । जसमा खाना, खाजासहितको पचास हजार डलर बराबरको वार्षिक व्यय भत्ता, एक लाख डलर बराबरको कररहित ट्राभल भत्ता, १९ हजार डलरको मनोरञ्जन भत्ता सामेल हुन्छ ।
घरको मर्मतसंहारका लागि वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलर भत्ता प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रपतिको अतिथिका लागि व्लेयर हाउसको समेत व्यवस्था हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई सेक्युरिटीको व्यवस्था, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्योरेन्सको समेत व्यवस्था हुन्छ । साथै, राष्ट्रपति तथा उनको परिवारलाई २४ सैं घण्टा कडा सुरक्षा प्रदान गरिएको हुन्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई छुट्टी भने हुँदैन । यसको सट्टा उनीहरुलाई दृश्यावलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
सेवानिवृत भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई वर्षैभरी पेन्सनको समेत व्यवस्था हुन्छ । सेवा निवृत भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई वार्षिक दुई लाख अमेरिकी डलर प्राप्त हुनुका साथै स्टाफसहित एउटा अफिसको व्यवस्था हुन्छ । यसबाहेक, पूर्व राष्ट्रपतिको विधवालाई वार्षिक एक लाख अमेरिकी डलर भत्ता प्राप्त हुन्छ ।